: at 10/18/2010 12:00:00 AM
Unknown said... | Monday, October 18, 2010 12:51:00 AM
သိပြီ မဟုတ်လား ဖွားကိ this is union of burma စတိုင်လေ........ ။
ဆောင်းနှင်းရွက် said... | Monday, October 18, 2010 2:13:00 AM
ဟင်းးးး .... !!!!!
ဝက်ဝံလေး said... | Monday, October 18, 2010 2:33:00 AM
အပေါ်က မဆောင်းနှင်းရွက်လိုပဲ “ ဟင်းးးးးးးးးးးး ” လို့ပဲသက်ပြင်းရှည်ကြီး ချလိုက်ပါတယ် ဖွားကိရယ်
ဒါတို့ပြည် ဒါတို့မြေ လို့ပဲ ပြောလိုက်ချင်ပါတော့တယ်
ကိုဇော် said... | Monday, October 18, 2010 4:10:00 AM
ဆေးရုံ ဆေးခန်း အတွေ့အကြုံဆိုတာ နည်းလွန်းလှတဲ့ ကျနော်တို့ အတွက် ကိုယ်နဲ့ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်မဲ့ အဖြစ်အပျက်ကို မျက်ဝါးထင်ထင် ကြုံခဲ့ရဖူးတယ်။ လူစိတ်ရှိသော ဆရာဝန် ၊ ဆရာဝန်မ ၊ နပ်စ် ၊ ဆေးဝန်ထမ်းများကို အားနာလို့သာ မရေးတာပါ။ ဒါပေမဲ့ အခု မကိ ရေးလို့ ကျနော် ရေးပါ့မယ်။ တစ်လခွဲလောက် Neuro မှာ တတ်ခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံလေးပါ။ ခံစားမှုမျိုးစုံကို တစ်နေရာတည်းမှာ ကြုံစေခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်ပေါ့။
ရွှေရတုမှတ်တမ်း said... | Monday, October 18, 2010 4:26:00 AM
ရွာကဆရာဝန်ကြီးတွေ က နောက်လိုက်နောက်ပါတပြုံကြီးနဲ့ လှည့်ရတာဆိုတော့ ..လူနာလန့်မှာစိုးလို့မလာတာပါ..
ဒေါက်တာချိုချိုဆီကိုဘကျောက် report က်ု fax ပို့ထားတယ်..အဲဒီ report မှာ ဆေးရုံက ဘကျောက်ကို အရက်သောက်တယ်ရေးထားသေး..တလွဲချည့်ပဲ၊ ဘကျောက် Tumour က5cm ရှိနေတော့ ခွဲဆို့မလွယ်ဘူး..ခု Nexavar နဲ့ သေးအောင်ကြိုးစားကြည့်မယ်တဲ့ သေးတာမသေးတာတော့ ကံတရားပေါ့၊ ဘကျောက်ကတော့ ပျော်ပျော်ပဲ..နောက်ဆံငင်စရာလဲ မရှိဘူးလေ..ခုထိတော့ ကောင်းနေတုန်းပဲ..သူတို့ပြောတဲ့ ၆ လ မှာမှ ကိစ္စချောမလားမသိဘူး
ကိုပေါ said... | Monday, October 18, 2010 7:23:00 AM
မြန်မာပြည်က လူတွေလည်း ဒုက္ခဆင်းရဲတွေ နေ့စဉ်ကြုံရလွန်းလို့ ထုံပေပေ ဖြစ်ကုန်ကြတာထင်ပါရဲ့။
အဆိုးဆုံးကတော့ လူသားဆန်ဆန် အလေးထားဆက်ဆံခြင်း မခံရတာပါဘဲ။ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာညှိုးနွမ်းရတယ်ပေါ့ဗျာ။ နေရာတိုင်းမှာ ဒီအဖြစ်မျိုးတွေချည်းမို့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်အကြောင်းတွေးတိုင်း စိတ်သက်သာစရာ ဖြစ်မလာပါဘူးခင်ဗျာ။
Anonymous said... | Monday, October 18, 2010 8:14:00 AM
ဒါတွေ ဒီလိုရှိတယ် ရိုးးစ်
rose of sharon said... | Monday, October 18, 2010 1:53:00 PM
ကျမဖေဖေလည်း ဆရာဝန်ကဆေးရုံကြီးသွားတာအကောင်းဆုံးဘဲဆိုလို့ ပို့လိုက်တာ ... သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာ သက်တောင့်သက်သာ မနေလိုက်ရဘူး... ဆေးတွေ စစ်နေရတာနဲ့ဘဲ အစားတောင် မစားလိုက်ရ ရှာဘူး... ဆေးစစ်တဲ့ အဖြေလဲ ဘာမှ မထွက်လာဘဲ အသက်ထွက်သွားချိန်မှ ဆေးစာက နှလုံးခုန်ရပ်သွားတာတဲ့... ဆေးရုံကြီးကို တကယ်စိတ်နာတယ်
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) said... | Monday, October 18, 2010 2:18:00 PM
အခုလို မကီကိုယ်တိုင် ဆေးရုံရဲ့ အတွေ့အကြုံကို ရေးလိုက်တော့ ကျွန်မတို့နိုင်ငံရဲ့ဆေးကုသမှုစနစ် ဘယ်လောက်တောင် ဆိုးဝါးနေတယ်ဆိုတာ ထင်သာမြင်သာ ရှိစေပါတယ်.. ဆေးရုံတကယ်တက်ခဲ့သူ၊ ရောက်ခဲ့သူတွေရဲ့ ကိုယ်တွေ့တွေဟာ ခုထက်အများကြီးဆိုးဝါးတယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မငြင်းနိုင်ပါဘူး။ ကိုယ်တိုင်ကြုံတဲ့အခါ ပိုပြီးသိသာပါတယ်..
ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း မရှိသရွေ့တော့ ဆေးကုသမှုစနစ်ဟာ ဒီတိုင်းရှိနေဦးမှာပါ။
ခြင် said... | Monday, October 18, 2010 3:43:00 PM
ကိရေ ရခဲ့လှတဲ့ လူဘဝကို ဟင်းရွက် ကန်စွန်းလို့လုပ်ရက်ကြပါ့... ပုံပြင်တွေထဲကလို လူတွေ အသက်ကယ်တဲ့ လူစွမ်းကောင်းဆိုတာတွေ... ဒီလိုလူမျိုးတွေတွေကို သွားပေးဖတ်ရင် ဘာလာကြောင်နေလဲတောင် အပြောခံရမယ်ထင်တယ်... အဟီး.. တာမီးကိုကမှားတာပါ...
Anonymous said... | Monday, October 18, 2010 4:33:00 PM
၀မ်းသာရမှာလား ၀မ်းနည်းရမှာလား ဒေါ်ကိကိ
ငွေအသပြာ မတတ်နိုင်လို့ကတော့ အသေခံရတာမှ ကောင်းအုံးမယ်
ahphyulay said... | Monday, October 18, 2010 10:33:00 PM
အမ က အခုမှ ပြန်ရောက်တော့ တာကိုး ၊
ဒါမျိုးတွေက ကြာပြီပဲ။ ဆယ်စုနှစ်မက ရှိနေပြီ။
ဒါကြောင့် “ တင်လျှော ” လို့ ခေါ် နေတဲ့ 
အဲ့ ဒီလိုဆေးရုံကြီးတွေ ရောက်ရင် အားလုံး
စိတ်လျှော့လိုက်ကြတာလေ။
noblemoe said... | Tuesday, October 19, 2010 9:56:00 AM
စာဖတ်ပြီး သက်ပြင်းရှည်ရှည်ချမိပါတယ် မမကိရေးး
~ဏီလင်းညို~ said... | Tuesday, October 19, 2010 10:08:00 AM
မြစ်ကျိုးအင်း said... | Thursday, October 21, 2010 8:24:00 PM
ဒီမြင်ကွင်းတွေကို အထူးအဆန်းလုပ်ပြီး ခံစားနေရင် မကီ တရားပေါက် သွားလိမ့်မယ်။
ဘယ်နေရာမှာများ လူတွေအတွက် သက်သောင့်သက်သာ နေခွင့် သေခွင့် ရှိလို့လဲ။
မလွယ်ပါဘူး အစ်မရာ..။ ဒီလိုပြောရတာလည်း ကြာပေါ့။
ကိုချစ်ဖေ said... | Saturday, October 23, 2010 12:12:00 PM
ဆင်းရဲတဲ့ရောဂါ ကြောက်လန့်နေရတဲ့ရောဂါ တွေ အားလုံးလိုလိုမှာ ဖြစ်နေရတာ.ဒေါ်ကိမြန်မာပြည်ရောက်တုန်း ဖြစ်ရပ်မှန်တွေ ဆက်ရေးပါဦးဗျာ..မှတ်တမ်းတွေဖြစ်တာပေါ့..
ဘာမှမလုပ်နိုင်သေးခင်အချိန်မှာ မှတ်တမ်းတော့ လုပ်နိုင်သလောက်လုပ်ထားလို့ ရပါတယ်ဒေါ်ကိ
တချိန်ချိန်တော့ အသုံးတည့်လာဦးမှာပါ.စစ်အစိုးရလက်ထက် မြန်မာ့ဆေးရုံဆေးခန်းများအကြောင်း လိုဟာမျိုးလေ.
Shinlay said... | Sunday, October 24, 2010 5:40:00 PM
An Asian Tour Operator said... | Thursday, October 28, 2010 11:56:00 AM
စိတ်မကောင်းစရာပဲဗျာ။ လူနာရှင်တွေက ဆရာဝန်တွေကို မျက်ထောင့်နီးကြီးနဲ့ ကြည့်ပြီး နံရံ ကို လက်သီးနဲ့ ထိုးတာ တို့ဘာတို့ မြင်ဘူးတယ်။